Htc Desire HD ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သောအရာများကိုပြောပြခဲ့သည်။ | Androidsis
antocara | | HTC က, reviews
ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်းရက်အနည်းငယ်အတွင်း၌ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏ကြေငြာချက်အပြီးတွင်မျှော်လင့်ချက်အများဆုံးဖြစ်သောဆိပ်ကမ်းတစ်ခုရှိခဲ့သည်။ HTC Desire HD။ ကိုယ်တော့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထားခဲ့ပါပြီ လုပ်ဆောင်ခြင်း ယနေ့တွင်လည်း HTC သည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည့်အမြင့်ဆုံးသော Terminal များဖြစ်သောဤစမတ်ဖုန်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏ထင်မြင်ချက်များကိုပြောပြရန်လိုအပ်သည်။
ကြိုးစားနိုင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချစ်သူHtc Desire HD နှင့်အခြား Android မော်ဒယ်များကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းများဖြင့်အခမဲ့ format ဖြင့်သင်ရှာနိုင်သောအွန်လိုင်းဖုန်းဆိုင်။
အားလုံး သင်ဒီမှာရှိ terminal ကို၏နည်းပညာဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ကျနော်တို့သူတို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပြီးပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါထူးခြားချက်ကိုတွေ့ခဲ့သမျှကိုရှင်းပြဖို့ငါဆက်သွားမယ်။ HTC Desire HD ပြီးတော့ဒီ terminal ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကူညီနိုင်မယ်ထင်တယ်။
El HTC Desire HD တစ်ခုထက်တစ်ခု၊ မျက်နှာပြင်အရွယ်အစားအတွက်အထူးထင်ရှားသည်။ ၄.၃ လက်မအရွယ်အစားရှိပြီး 4,3x480-pixel resolution ဖြင့်ဖော်ပြပေးနိုင်ပြီး၎င်းကိုသင်၏လက်ထဲထည့်ပြီးသည်နှင့်အရာရာတိုင်းသည်သေးငယ်သွားသည်။ ၎င်းသည်အချို့သောသူများသည်သေးငယ်။ သတိပညာရှိသောအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေသောအခါဤမိုဘိုင်းကိုဖယ်ရှားရန်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဤအရွယ်အစားသည် terminal ကိုတစ်ဖက်တည်းဖြင့်လည်းအသုံးပြုသော်လည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိသော်လည်းအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အနည်းငယ်ခက်ခဲသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်တို့ကိုစွန့်ခွာသောပထမ ဦး ဆုံးဗီဒီယိုမှာမီးမောင်းထိုးပြ။
ဒီဖန်သားပြင်ဟာကြီးမားပြီး resolution ကိုလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့က SLCD မျက်နှာပြင်ကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာ Super Amoled နဲ့မတူဘူးဆိုတာပြသနေပါတယ်။ အရောင်များသည်အနည်းငယ်တိတ်ဆိတ်။ လုံးဝမတောက်ပပါ။ ရှင်းနေသည်မှာ Super Amoled မျက်နှာပြင်ပါ ၀ င်သည့်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အတူဤစမတ်ဖုန်းကိုကျော်လွှား။ ရနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအများဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်သည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာဤအချိန်တွင် Htc သည်ခေါင်းပေါ်လက်သည်းကိုထိခြင်းဖြင့်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသတ္တုတစ်မျိုးတည်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးလူသိများသော Htc Legend ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းဤ terminal မှကျွန်ုပ်တို့ယူဆောင်လာသည့်အလူမီနီယံသံများမပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းသည်ကြေးနီသေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုယနေ့ဆိပ်ကမ်းအနည်းငယ်တွင်လေးနက်မှုနှင့်ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုအပြင်မာကျောမှုတို့ကိုပေးကောင်းပေးလိမ့်မည်။
Terminal ၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အမြင့်ဆုံးသော Htc terminal မ်ားကိုကျွန်ုပ်တို့ရင်ဆိုင်နေရသည်ဟုဆိုရုံသာလျှင်ဤပြproblemsနာနှင့်ပြfailနာများသို့မဟုတ်ပြတ်တောက်မှုများရှိခဲ့လျှင်ထူးဆန်းလိမ့်မည်။ 1Ghz ပရိုဆက်ဆာနှင့်၎င်း၏ 768 Mb RAM သည် system တစ်ခုလုံးကို application များဖွင့်ခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းနှင့်အသွင်ကူးပြောင်းခြင်းများအပါအ ၀ င်အရာအားလုံးကိုပျံသန်းစေသည်။
flash နှစ်ဆ၊ အလိုအလျောက် focus နှင့် 8p မှတ်တမ်းတင်နိုင်သောစွမ်းရည်ရှိသည့်၎င်း၏ 720 mpx ကင်မရာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ terminal တွင် multimedia ရှုထောင့်ကိုဖြေရှင်းရန်ထက်ပိုသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ၎င်းသည် Carl Zeiss မျက်မှန်သမားမဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အမြင်တွင်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကင်မရာကိုစီမံသောဆော့ (ဖ်) ဝဲတွင်လုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ဗွီဒီယိုတွင်သင်မြင်တွေ့ရမည့်အရာကကျွန်ုပ်တို့အားကင်မရာပေးနိုင်သည့်အရာသည်ပိုမိုကြီးမားသည်။
ဒီ၏အခြားအနိမ့်အချက် HTC Desire HD အဲဒါဘက်ထရီပါ။ ၎င်း၏တင်ပြချက်တွင်၎င်း၏ 1230mAh စွမ်းရည်သည်ရှားပါးပုံရသော်လည်းကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှားယွင်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မရှိခဲ့ပါ။ Terminal ကိုအလတ်စားအသုံးပြုရန်ဒုတိယဘက်ထရီဝယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောလိမ့်မည်။
၎င်း၏ interface သည် Ht Sense ၏ဒုတိယဗားရှင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားဆိပ်ကမ်းများမှကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာသိပြီးဖြစ်သည်။ ဝစ်ဂျက်အနည်းငယ်နှင့်အချို့သောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများ မှလွဲ၍ အသစ်သောအကြောင်းအရာများ မှလွဲ၍ အခြားအရာများမပါရှိ။
Htc တွင်ပါ ၀ င်သည့် GPS navigation software အသစ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသင့်သည်။ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားပြီးတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်မှုများနှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုမှုကိုများစွာလွယ်ကူစေသည်။ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အင်္ဂါရပ်အသစ်များလည်းဖြစ်သည် htcsense.com ဒီဆိပ်ကမ်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားတယ်၊ ၎င်းမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ Terminal အတွက်အရင်းအမြစ်များကိုရယူနိုင်သလိုဆုံးရှုံးမှုအတွက်ဖုန်းကိုဝေးလံခေါင်သီရှာဖွေမှုရွေးစရာများလည်းရှိသည်။ သို့သော်ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်က၎င်းတို့အား Desire ၏လုပ်ဆောင်မှုအဖြစ်မဟုတ်ဘဲ Desire Hd ကိုဖြည့်စွက်သည်ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏မျက်နှာသာရအချက်များဖြစ်သော်လည်းစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ရန်သို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ရန်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအရာမဟုတ်ပါ။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ကျနော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ် HTC Desire သည်ကြီးမားသော terminal တစ်ခုဖြစ်သည်, ကြော့ရှင်းမြန်ဆန်, ဝက်ဘ် browsing သို့မဟုတ်ထူးဆန်းသောစာအုပ်ကိုဖတ်ခြင်းအဘို့အကြီး ((ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါဖြစ်စေဒီအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အရွယ်အစားညီမျှသို့မဟုတ်သေးငယ်အတွက်ဖြစ်စေအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံပြုမဟုတ်သော်လည်း), ငါတို့သည်လည်း multimedia အကြောင်းအရာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒီ terminal ပေါ်မှာကြည့်ရှုနိုင်သည် ပိုမို၍ အသံတိတ်သောအရောင်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုမချန်ဘဲရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စီးရီးကိုပင်မြင်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင် Htc interface ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ဖုန်းဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » Htc Desire HD ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေထင်လဲဆိုတာပြောပြပါမည်
ပုံမှန်လည်ပတ်မှုရှိသည့်ဘက်ထရီ၊ ဘယ်လောက်ကြာကြာအသုံးပြုနိုင်မလဲ။ iphone4 နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်?
ဒီဖုန်းကအံ့သြစရာကောင်းတယ်၊ ငါကတော့ android revolution hd နဲ့အမြစ်တွယ်နေပြီးပျံတယ် - ဘက်ထရီက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုရှည်တယ်။
မင်္ဂလာပါ နေကောင်းလား! ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ရုံနဲ့၊ android revolution hd နဲ့ဒေါင်းလုပ်ရယူရန် (သို့) အမြစ်တွယ်ရန်ကျွန်တော့်ကိုဘယ်မှာအကြံပေးတယ်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
ငါ့မှာရှိတယ်၊ တစ်ခါတစ်လေဘက်ထရီက ၁၂ နာရီမကြာပါဘူး ကျွန်တော် charger ကိုအမြဲတမ်းသယ်ဆောင်ပါတယ် ငါမြင်တာတစ်ခုတည်းသောအမှားပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒါဟာအားကောင်းတဲ့ terminal တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့မှာတစ်ခုရှိတယ်၊ ငါမှာ iPhone ၄ ရှိတယ်။ ဘက်ထရီကတော့သူတို့အတူတူပဲ။ gps၊ ဓာတ်ပုံများ၊ အီးမေးလ်များ၊ ကွန်ရက်များစသဖြင့်တစ်နေ့လုံးကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်။ တတိယဘက်ထရီအားဖြင့်ညတိုင်းအားသွင်းသည်။ ကျွန်ုပ်သူငယ်ချင်းကနေ့လည်စာစားချိန်တွင်သူမ iPhone4ကိုသာစကားပြောရန်သုံးသည်။ တစ်ညသူမအားသွင်းလျှင်၊ နေ့လည်စာမစားမှီနောက်တစ်နေ့တွင်သူ၌ဖုန်းမရှိပါ။ HTC Desire HD ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိသိသာသာတိုးတက်လာသည်ကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။
အချို့ဆိုဒ်များတွင်ပြောသည့်အတိုင်း htc evo 4g ကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်သည် htc မှမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် 4G .. hehe ဒီ terminal ကိုအမွေးဖြစ်ပါတယ်လျှင်။
အန်ဒီ Garcia က ဟုသူကပြောသည်
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတော်များများကဒီ android ကိုကျွန်တော့်ကိုလက်ရှိအကောင်းဆုံးထဲကတစ်ခုအဖြစ်အကြံပြုခဲ့ကြပေမယ့်အော်ပရေတာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းအစီအစဉ်ကိုကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကကျွန်တော့်ကိုလှောင်ပြောင်ချင်ကြတယ်၊ ဆိပ်ကမ်းအသစ်ထွက်မလာကိုကြည့်တယ်၊ ငါသည်ငါ့ spica နှင့် yoigo နှင့်အတူဆက်လက်။
Andy Garcia သို့ပြန်သွားပါ
အန်ဒီသည် founjaus ကိုကြည့်ပြီး yoigo နှင့်ကြည့်လျှင်အလွန်ကောင်းသည်။ ငါရလိမ့်မယ်
HTC Desire HD ကိုကျွန်ုပ်မှာထားပါပြီ၊ အမှန်တရားမှာကျွန်ုပ်သည်၎င်းဖန်သားပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ သံသယများရှိသည်။ လူအချို့က၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ အချို့ကအလွန်ဆိုးသည်ဟုဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာပြင်မှာ SuperLCD၊ ဒီမိုဘိုင်းလ်၏ဖန်သားပြင်တွင်မည်သည့်ပစ္စည်းရှိကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြပါ။ ဘယ်လိုနေလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
မျက်နှာပြင် SLCD ဖြစ်ပြီးတုန့်ပြန်မှုအချိန်ကောင်းမွန်သည်။ တစ်ခုတည်းသောအရာမှာအရောင်များနှင့်အရောင်တောက်ပမှုတို့သည်အလွန်မကောင်းသောကြောင့်သူတို့သည်တောက်ပမှုမရှိဘဲတောက်ပနေသည်။ အရာရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ
သင်၏အဖြေ antocara အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
မျက်နှာပြင်သည် superLCD (SLCD) ဖြစ်ပြီးအရောင်နှင့်အရောင်များစွာရှိပါက၎င်းသည်သင်မည်မျှအရောင်နှင့်မည်မျှတောက်ပမှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုချိန်ညှိချက်များတွင်ထည့်နိုင်သည်။
အအေးမိတဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ... .ha ha ha
ကျေးဇူးပြု၍ သို့သော်ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်ဗီဒီယိုကိုဤမျှများပြားသော "yu tu" (youtube) နှင့်အခြားသူများနှင့်မည်သို့မှာယူနိုင်မည်နည်း။
မိုဘိုင်းအတွက် ... .it အိမ်ရှင်ရဲ့! မျက်နှာပြင်ကကျွန်တော့်အတွက်အရေးမကြီးဘူး။ သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကဇိမ်ကျတယ်။ Amoled လိုမျိုး Samsung နဲ့ Screen ပါတာကဘာလဲ။
ယောက်ျားများ၊ HTC Desire HD ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည့်ဤဗွီဒီယိုကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် Android application တစ်ခုဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းရှိမရှိကိုကျွန်ုပ်မသိပါ (Android ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ)၊ သို့သော်စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြားဆိပ်ကမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပါသည်။ ..
ဤမိုဘိုင်း၏အားနည်းသောနေရာ၊ မျက်နှာပြင်၊ သို့သော်“ feps” ဆိုသည့်အတိုင်းအဘယ်ကြောင့်စူဂယ်လ်လီစ် (ဥပမာ - SGalaxyS) ကိုသင်လိုချင်ပါသနည်း၊ ဥပမာ အကယ်၍ သင်သည် GPS လိုအပ်လျှင်၎င်းသည် shit သို့သွားသည်သို့မဟုတ် ... ဂိတ်
ယခုပင်လျှင်ဘက်ထရီသည် "အချက်အချာ" ဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားမိုဘိုင်းဖုန်းများနည်းတူဘက်ထရီများကိုမူရင်းမဟုတ်သောဆိပ်ကမ်းများအတွက်ရောင်းချသောဝက်ဘ်ဆိုက်များရှိသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည်မည်မျှလုံခြုံမှုရှိမည်ကိုမသိသော်လည်းဟေးသည်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖန်သားပြင်ရဲ့အရောင်များ၊ ၄.၃ '' ရှိတာကိုငါမကြိုက်ဘူး၊ အလွိုင်းဖန်သားပြင်နဲ့အတူ၊ အကယ်လို့မင်းကရုပ်ရှင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လက်တော့ပ်ဒါမှမဟုတ်တီဗီမှာကြည့်ပြီးငြီးငွေ့စရာမျက်နှာပြင်တစ်ခုကြည့်ဖို့ပျင်းနေတာလား အရောင်များနှင့်အတူ .. ငါကအများကြီးရှိပါတယ်ထင်ပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲဒီ terminal ကိုကျွန်တော်ရတော့မှာပါ။ iPhone4ထက်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာနှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းကပိုကောင်းပါတယ်။
ငါယောက်ျားတွေဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ ငါမသိဘူး၊ ငါဒီမိုဘိုင်းဖုန်းဒါမှမဟုတ် NOKIA N8 ဒီပုံကိုယူရင် N8 က MULTIMEDEDIA အတွက်ဖြစ်တယ်၊ HTC DESIRE HD ဆိုတာကိုသူတို့ပြောပြတယ်။ မသိဘူး နောက်ထပ်အင်တာနက်ခေါင်းစဉ်များ၊ HTC ၏ကြီးမားသောပြLEနာသည်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘက်ထရီသည်တစ်နေ့တာအားလပ်ချိန်ရောက်နေတယ်၊ ​​အကယ်၍ သင်သည်များများသုံးပါကကျွန်ုပ်သည်အမှန်တရားကိုဘာလုပ်ရမှန်းမသိနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုမှမတွေ့ရပါဘူး။ ဒီမှာ OKE, TODSS နှုတ်ခွန်းဆက်နှင့်ခရစ်စမတ်ခရစ်စမတ်။
သင်ဤ Nokia နှင့် Nokia ကိုနှိုင်းယှဉ်။ မရပါ။ ဘာမျှမဖြစ်နိူင်ပါ။ ၁၂ လက်မအရွယ်ကင်မရာသာမဟုတ်ပါ၊ သင်ငွေကိုအချည်းနှီးသာသုံးစွဲတော့မည် (NOKIA UFFFFFF SHIT UNCLE)
ဘက်ထရီကိုမကြောက်ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်အလုပ်ခွင်၌ (တစ်နေ့လုံးအသုံးပြုရန် (မေးလ်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် geolocation၊ whattsapp, talk, gmail, လဲလှယ်ခြင်းနှင့်စာပို့ရန်တွန်းအားပေးခြင်း) ကိုတစ်နေ့လုံးအသုံးပြုပါသည်။ မျက်နှာပြင်ကအရသာရှိဖို့လိုသည်။ ငါက၎င်းကိုအသုံးချပြီးအမှန်တရားမှာ၎င်းသည် Galaxy S ၏နေ့ထက်စော။ အိပ်ရာထဲတွင်အလင်းမရှိဘဲထိခိုက်မှုနည်းသည် !!! 😉
ကျွန်ုပ်တွင်ဤဖုန်းကို ၃ ရက်လုံးလုံးအသုံးပြုထားပြီးဘက်ထရီသည် ၇ နာရီခန့်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုဘဲကြာရှည်ခံသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်ဖြစ်ပါသလားသို့မဟုတ်ပြaနာရှိပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ ပထမဆုံးပြောရရင်တော့ငါဟာဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်မှာ HTC DESIRE HD ရှိတယ်၊
ပထမနေ့ (၇-၈ နာရီ) နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဘက်ထရီပြhasနာသည် ၂ ရက်အထိကြာသွားသည်။ ထို့ကြောင့်ဖုန်းကိုအသင့်အတင့်သုံးလျှင်ကျွန်ုပ်သည်မိနစ်တိုင်းတွင်ချိတ်ဆက်မထားပါ။
ငါ့အတွက် iPhone4ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်။
သို့သော်၎င်းနှင့် ပါတ်သက်၍ အရာအားလုံးသည်တိုးတက်လာသည်။ ပထမနေ့များ၊ သူ၌ရှိသည့်အရာအားလုံးကိုမြင်လို။ သင်ခဏတာရပ်နားရန်မလိုတော့ပါ။
တစ်စုံတစ် ဦး ကကြေညာသူကိုရေတစ်ခွက်ပေးပါ။
ကျွန်ုပ်၌၎င်းကို ၂၀၁၁ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်မှစ၍ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အထိအရာအားလုံးကောင်းမွန်ခဲ့သည်။ GPS (load လုပ်သည့်အခါ) သည် load လုပ်ရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သတိပြုမိသည်။ ဘာတွေဖြစ်နေသလဲသိလား။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ
ငါ့မှာ htc desire hd လစုံတွဲတစ်တွဲရှိခဲ့တယ်။ ငါအားနည်းချက်ကတော့ဘက်ထရီသက်တမ်းတိုတာပဲ။ ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနေ့တိုင်းသယ်ဆောင်ရပါမယ်။ ငါအရင်ကသိပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် LCD screen အမျိုးအစားကိုသိတယ်
iPhone4နှင့် blackberry torch 9800 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင် iPhone4ရှိသည့်အပြင်သူတို့သည်ငါ့ကို htc desire HD သို့မဟုတ် blackberry torch 9800 ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သင်ဘာကိုအကြံပေးနိုင်သနည်း။
iPhone4နှင့် Blackberry Torch 9800 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ
စီးကရက်အသံသည်ဗီဒီယိုကိုဖျက်ပစ်သောလူသည် tronko ကိုဂရုစိုက်ပြီးဥနှစ်စုံရှိသည်
မကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့မှာရှိခဲ့ပြီးဘက်ထရီက poop ဖြစ်နေပြီ။ ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးအတွက်ယူရို ၅ ဒေါ်လာကုန်ကျမယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့တရုတ်က ၁၅၅၀mAh အမှာစာမှာထားတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဒီဖန်သားပြင်နဲ့အတူကြီးကျယ်တဲ့မိုဘိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးဓာတ်ပုံတွေကိုအစစ်အမှန်အရောင်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာ Samsung Galaxy S 1550 ရှိတယ်။ သူတို့ကပိုအရောင်အသွေးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် htc ကိုငါသဘောကျတယ်။ ဗီဒီယိုတွေကလည်းကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်တို့မှာဖော်ပြထားတဲ့အချက်သုံးချက်နဲ့ Iphone5 ရှိလို့ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကင်မရာများကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်မိုဘိုင်းဖုန်းများနဲ့အတူအရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်ဖေဖော်ဝါရီ လမှစ၍ hd ရှိ၍ ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ ဟုတ်ကဲ့ဆိုးတာကတော့ဘက်ထရီကကြာရှည်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ၂.၃ ကိုမွမ်းမံပြီးကတည်းကသူကနည်းတယ်။ ဒါပေမယ့် Weno က ၁၅၀၀ လောက်ထိတော့မယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မိုဘိုင်း makina! ငါမှာ Samsung galaxy s ရှိတယ်၊ အမှန်တရားကတော့ငါသူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်လို့မရဘူး၊ စူပါအမ်မမ်ဖန်သားပြင်၊ အမှန်တရားကငါ့အတွက်ရောင်စုံ shit တွေအများကြီးပုံပေါက်တယ်။ အဲဒါကအရမ်းကောင်းတယ်။ ထိုလမ်းဖြင့်နှေးကွေးခဲ့သည်! ကျွန်ုပ် HTC flyer ကိုရချင်ပါတယ်။ ဒါဟာ sooo wapa ဖြစ်ဖို့ !!
ငါဘက်ထရီအကြောင်းမေးချင်ပါတယ်။ နေရာတော်တော်များများမှာပြောတာကနည်းနည်းပဲကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့် ၇ နာရီကအရမ်းနည်းတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်အသက် ၈ နှစ်တွင်ကျောင်းမှကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်၎င်း၊ ဂီတ၊ အင်တာနက်နှင့် wapp, twitter နှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများကိုနားထောင်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ ငါ့ကိုဒီလောက်ကြာရှည်ခံမယ်လို့ထင်သလား
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၀ ယ်ရန်ဝယ်လိုက်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဖြစ်ပျက်ပြီးမနက် ၈ နာရီတွင်အိမ်မှထွက်ခွာပါမည်။ မွန်းလွဲ ၇ နာရီထိပြန်မလာပါ။ နာရီပေါင်းများစွာကြာရှည်ရန်ဘက်ထရီလိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တွင် HTC Desire HD ရှိပြီးဖုန်းကိုတပ်ဆင်ရန်အတွက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုသို့ ၅ ကြိမ်ခေါ်ယူခဲ့သည်။ သူတို့ကျွန်တော့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောအရာကတော့ SWAP ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးသူတို့မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ။ အချိန်တိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်လဲဆိုတာက crash၊ အမြဲတမ်း restart လုပ်တာ၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ screen ကအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ၅ ကြိမ်အကြာတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုသို့ယူပြီးအဖြေမတွေ့ပါ။ ဤတစ်ကြိမ်တွင်ကျွန်ုပ်ပန်းကန်ကိုပြောင်းလိုက်သည်၊ ကင်မရာသည်မှန်ကန်စွာအာရုံမစိုက်ပါ၊ ဖုန်းတုန်ခါသောအခါ၎င်းသည်ပြိုကွဲတော့မည်ပုံရသည်……
ဒီဖိုရမ်မှ Vodafone ၏နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုကောင်းများကိုလူတိုင်းနားလည်စေချင်ပါတယ်။
ငါဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လည်းစကားပြောခဲ့ကြပြီးသူတို့ကငါ့ကိုဖြေရှင်းချက်မပေးပါဘူး။ ဒါ့အပြင်သူတို့ပေးတဲ့အရာအားလုံးဟာပြproblemsနာတွေဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကသူတို့ဖုန်းမှာရှိခဲ့တဲ့ပြုပြင်မှုတွေအားလုံးနဲ့ဖက်စ်တွေပို့ဖို့ပြောတယ်။ စတိုးဆိုင်မှာပြုပြင်မှုအားလုံးလုပ်ပြီးပြီ။ တစ်ယောက်ယောက်ကငါ့ကိုကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုလုပ်ဖို့ငါ့ကိုဖုန်းဆက်လိမ့်မယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော့်ကို terminal အသစ်တစ်ခုအတွက်ပေးမယ်၊ ပြီးတော့အဲဒါကိုပေးပြီးအမြဲတမ်းသုံးမယ်ဆိုရင်ငါ့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ ပြီးတော့သူတို့အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အချက်များအစီအစဉ်၏စျေးနှုန်းဖြင့်အခြား terminal တစ်ခုကိုရောင်းသည်။ အခြား terminal နှင့် HTC Desire HD ကိုငါစက္ကူအလေးချိန်အဖြစ်မထားသည့်အခြေအနေတွင်ပေးသည်။ ကမ်းလှမ်းချက်တွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး၊ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာ terminal ကိုပေးစေချင်တယ်၊ ငါ terminal အဟောင်းနဲ့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
မိုဘိုင်းသည်အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်တစ်လမျှမိုဘိုင်းရှိသည်။ ဘက်ထရီမည်မျှကြာသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ရုပ်ရှင်များစွာတင်ထားသည်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ လျှောက်လွှာနှင့်အင်တာနက်ကို ၅ နာရီကျော်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီလိုပြောခြင်းအားဖြင့်ဒီနေ့စမတ်ဖုန်းတွေဟာသူတို့များများစားစားသုံးနေတဲ့ application တွေအတွက်နေ့စဉ်အားသွင်းရမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကင်မရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်သည်။ ထိတွေ့မှု၏ထိရောက်မှုသည်မထူးခြားပါ။ အတိုချုပ်အားဖြင့် ၁၀ တွင်အနက် ၉.၉ ကိုပေးသည်
Luis Eduardo Castilla Hernande ဟုသူကပြောသည်
Luis Eduardo Castilla Hernande အားပြန်ပြောပါ
Froyo သည် Archos Android တက်ဘလက်များကိုလည်းလာသည်
PapayaMobile သည်၎င်း၏ဂိမ်းအင်ဂျင် SDK ကို၎င်း၏ platform အတွက် Android ဂိမ်းများကိုဖန်တီးရန်စတင်ခဲ့သည်